Archdiocese of Mandalay blog: March 2013
အမှားနှင့် အမှန်၊ အမှန်ကိုမြေလှန်
အမှန်ဟာ အမှန် ပါပဲ။
လူညီလို့ “ဤ” “ကျွဲ”ဖြစ်ရိုးလား
လောက ဥပဒေ . . . .
အနိုင် အရှုံး၊ အနိမ့် အမြင့်တွေနဲ့
အမှား အမှန်တွေ ၊ဝေခွဲ မရလို
တွေဝေမနေနဲ့
အချိန်သည်သာ အကောင်းဆုံး တရားသူကြီးဖြစ်လတ္တံ့
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:31 PM
ယဉ်ကျေးပါရဲ့ . . . ။
ဧည့်သည် သူစိမ်းကို ပျူငှာဖို့
အ၀တ် မရှိသူကို ဖုံးလွမ်းဖို့
လက်ပိုက်မထားပါနဲ့ . . . ။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:50 PM
အောင်မြင်မှုကို လူတိုင်း၊ လူတိုင်း လိုချင်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်များက ပိုပြီး၊ အေင်မြင်ချင် ကြပါတယ်။ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ အသီးအပွင့် ကိုစောင့် စားရပါတယ်။ စိတ်ရှည် သီးခံခြင်း၊ ပါရမီ အပြည့် ရှိရပါ တယ်။ “နေရိပ်အလာ၊ နေပူကစောင့်” ဆိုသလို ကြိုးစား ရပ်တည်ရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လူငယ်များဟာ အောင်မြင်ခြင်းကို နေ့ခြင်း၊ ညခြင်းဖြစ်ချင် ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လမ်းများကို ရှာဖွေတတ်ပြီး လမ်းမှားရောက်တတ် ကြပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ကျောက်တုံးတစ်တုံးကို တစ်ကြိမ် ထုရုံဖြင့် မကွဲနိုင်လျှင် နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် စသည်ဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ထုပြီး (၁)ကြိမ်၊ အကြိမ်တစ်ရာ အဖြစ် အားစိုက်၍ ထုခြင်းဖြင့် ကွဲသွားသည်။လောက၏အောင်မြင်မှုများ သည်လည်း ထိုနည်းတူဖြစ်သည်။ (၉၉)ကြိမ် တိုင်အောင် ထုခဲ့တဲ့ အရှိန်ကြောင့်လား . . . ဒါမှမဟုတ် အကြိမ် (၁၀၀)ဟု ဆိုသော နောက်ဆုံး အကြိမ်ကြောင့်လား . . မှန်ပါသည် အရင် ထုခဲ့သော (၉၉)ကြိမ် အထိ ကြိုးစား ထားခဲ့သော စွမ်းအားများကို အကြိမ်(၁၀၀)က အသိ အမှတ်ပြုပေးခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အသီးအပွင့်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဇွဲရှိ၍ ဟုအောင်မြင်မှုကို အသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းခေါ်သော ဇွဲ လုံ့လကြောင့် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် လူငယ်များ ကျောက်တုံးကို နမူနာ ယူ၍ (၉၉) ကြိမ်မြောက်အောင် ထုယူနိုင် သော စွမ်းအားကို မွေးမြူရင်း ကြိုးစားသင့် ပါသည်။
အောင်မြင်ခြင်း စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး အောင်မြင်မှုကို မရနိုင်ပါ။ အောင်မြင်မှု ရရန် လမ်းလွဲခြင်း၊ နည်းလမ်း မမှန်ခြင်းနှင့် စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်မှု နည်းခြင်း ကြောင့် အောင်မြင်မှု ရရန် နှောင့်နှေး တတ်ပါတယ်။ အ ယူအဆ မှားခြင်း ဥပမာ ရေ ၊မြေ ရပ်ခြားသွား၍ စီးပွားရှာမှ သာလျှင် မိမိ မိသားစုဘ၀ အဆင်ပြေမည်ဟု အထင် မှားတတ်ခြင်းမှာလည်း မအောင်မြင်စေသော အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ ခွန်အား၊ သတ္တိယူခြင်းဖြင့် ယုံကြည် စိတ်ချ၍ အောင်မြင်သော ဘ၀လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံး အချက်မှာ ရိုးသားစွာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို ၀န်ခံတတ်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ကြိုးစားနှုန်းကို လိုက်၍ ဇွဲရှိသော သူ၏ ဆုလဒ်ကို ဘုရားသခင် အမြဲပေး တတ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ရှေ့မှာ (၁၀)ကြိမ် ဒူးထောက်ခြင်း ထက် ဘုရားရှေ့မှာ အကြိမ်(၁၀၀) ဒူးထောက်ခြင်း သာလျှင် ထိရောက်သော နည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားပေးထား သော လက်ရှိ ဘ၀၊ ကိုယ်နှင့် ထိုက်သော ဘ၀ကို လက်ခံတတ်ပြီး ကြိုးစား ရုန်းကန်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်သော ဘ၀များကို လူငယ်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ရင်း . . .